Toyota Land Cruiser 398-Lakhs | Toyota | Yangon Region
Toyota Land Cruiser 398-Lakhs - 398.00 Lakhs
Engine size (cc): 5
4.7 Cc ,4wheel drive
Sunroof, Original Navi TV
Leather Seat (G selection)
Name : U Aung Gyi
Mobile : 095194983
Admin please !!!!
Toyota Kluger L 2006/6 (JUNE) Model - 2006/6 (JUNE) Color. - Pearl White(062) Engine - 2400 Cc (2 wd) *ACU 20-* Grade - 2.4 S X package (Kluger L) Number - 2K(YGN) Kilo - 16**** Steering Up
Kluger(6M/--Ygn) 2003 late (2004 ရုပ်) 2.4 (2 wd) / Org Tv / ခုံသုံးတန်း killo 100000 / လိုင်စင် Jan- 2021 အတိုက်ခိုက်လုံးဝရှင်း။စိတ်ကြိုက်ယာဉ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ *** ( 465 သိန်း ) *** Ph : 09409000908
မော်ဒယ်မြင့်မြင့်နံပါတ်မြင့်မြင့် Fielder 2012 Model လေးတစီးရောင်းပေးမယ်....... Toyota Fielder ဆိုတော့ အိမ်စီးသမား နယ်သမား အားလုံးကြိုက်တဲ့ကား Model 2012 ဆိုတော့ အရှေ့ရုပ် နောက်ဖင်တင်မက ဘေးနှဖက်ပါ ပုံက ပြောင်းသွားတာပေါ့ အင်ဂျင်ပါဝါ 1500ဆိုတော့ ဆီစားလ...
ALPHARD 2005 Late(2006) MZG grate 3000 cc 2-WD 5K/----(YGN) လိုင်စင်အသစ် 695 သိန်း 09420121783
Model 2016 Engine 1300cc Kilo 3**** Left Hand Steering NPW license